Nala so xiriir | Somali Media Mapping
Boga SMM wuxuu u baahan yahay cusbooneysiin joogto ah; ka qeyb galkaagu wuxuu fure u yahay inay macluumaadka ku qoran boga ahaadaan kuwii ugu danbeeyay uguna wanaagsanaa. Fadlan noogu soo dir email hadaad rabtid inaad wax saxdo ama macluumaad ku kordhiso la xiriiro warbaahintaada waxay sii deysay.
Waxaa kale oo aan sidoo kale soo dhaweyneynaa wixii su’aalo guud ah ama faalooyin ah oo laga yaabo inaad qabtid dhanka boga SMM.
Fadlan fariintaada ku reeb hoos warqada loogu talo galay soo xiriireyaasha dib ayaana kuugu soo celin doonaa sida ugu deg degta badan.